के तपाइँ प्यानल मा छाता कपडा काट्ने थाहा छ?
Ovida छाता कारखाना को पालन गर्नुहोस्, तपाइँ अधिक छाता प्रगति थाहा पाउनुहुनेछ।
रेशम पर्दा मुद्रण
आज हामी छाता मा मुद्रण तरीका को धेरै प्रकार छ।
रेशम पर्दा मुद्रण, गर्मी हस्तान्तरण मुद्रण जस्तै।
तल तपाइँको सन्दर्भ को लागी रेशम स्क्रीन मुद्रण भिडियो हो।
पहिले हामी सबै वर्ग रेशम मोल्ड, मसी, कपडा प्यानलहरु को रूप मा सबै सामाग्री तयार गर्नु पर्छ।
दोस्रो, हामी मोल्ड को आवश्यकता को पालन गर्नेछ, मसी को उपयोग लेआउट साँचो बनाउन को लागी।
तेस्रो कामदारहरु टेबल मा छाता प्यानलहरु राखे, त्यसपछि अर्को हात रेशम स्क्रीन प्रिन्टि join मा सामेल यो भिडियो बाट तपाइँ सबै विवरण स्पष्ट देख्न सक्नुहुन्छ।
हामी छाता मा सबै ग्राहकहरु राम्रो विचार प्राप्त गरीरहेका छौं। लोगो मुद्रण छाता साँच्चै अचम्मको र लोकप्रिय छ, फोटोग्राफी छाता छाता साँच्चै छाता धेरै विशेष बनाउन।
हामीलाई लोगो छाता को तपाइँको कथा दिनुहोस् info@ovidaumbrella.com
पहिले हामी सानो रोलिंग भागहरु मा रोलिंग कपडा काट्नु पर्छ। कति भागहरु हामी काट्नु पर्छ, यो न केवल छाला पसली आकार मा निर्भर गर्दछ, तर रोलिंग कपडा को लम्बाइ।
सामान्यतया छत्री मा प्रयोग गरी 65inch र 68inch रोलिंग कपडा छ। तेसैले यो २ देखि ४ साना भागहरु मा काट्न सक्छ बनाउँछ।
जस्तै 19inch बच्चाहरु छाता हामी 4small कपडा भागहरु काट्न सक्छौं, 23inch नियमित छाता 3ports मा काट्न सक्छ, जबकि 30 इन्च वा समुद्र तट छाता मात्र2वा3भागहरु मा काट्न सक्छ।
जबकि अनुकूलित छाता आकार अनुकूलित रोलिंग कपडा को उपयोग गर्न सक्छ। तेसैले यदि तपाइँ तपाइँको आफ्नै डिजाइन छ हामी नयाँ छाता मा जोखिम हुन सक्छ। तपाइँ हामीलाई ईमेल गर्न सक्नुहुन्छinfo@ovidaumbrella.com
कपडा को सानो भागहरु हामी ताला लगाउनु पर्छ। हामी किन कपडा ताला लगाउनु पर्छ?
छाता किनारा सजीलो भाँचिएको हुनाले, त्यसैले हामी यसलाई राम्रो संग बन्द गर्न को लागी छ, कि छाता बिल्कुल बनाउँछ।
जबकि जर्मनी मा छाता उत्पादन मा नयाँ टेक्नोलोजी छ, चाकू मिसिन कुनै रेशम लाइन बिना यो आफै छाता कपडा ताला लगाउन सक्छ। तेसैले केहि शीर्ष उच्च उच्च गुणवत्ता छाता अझै पनी जर्मनी वा जापान मा बनेको छ। यदि तपाइँ फरक को अधिक जान्न चाहानुहुन्छ बस हामीलाई थाहा दिनुहोस्info@ovidaumbrella.com
जब छाता कपडा बन्द हुन्छ, हामी प्यानलहरुमा काट्नु पर्छ।
त्यस पछि हामी प्यानल लकिंग मा जान्छौं। यहाँ हामी प्रत्येक प्यानल मेशिन टेबल मा राखिएको लिनु पर्छ। त्यसपछि प्रत्येक दुई प्यानल एक साथ लक। त्यहाँ 6ribs छाता, 8ribs छाता, 10ribs छाता र 16ribs छाता छन्। तर हामी 7ribs छाता, 9ribs छाता, 12ribs छाता र 24ribs छाता जस्तै विशेष पसली छाता छ। यो कामदारहरुको लागी ठूलो काम हो। तर सामान्यतया सबैभन्दा लोकप्रिय एक ribribs छाता हो। 8panels एक साथ ताला लगाए पछि सम्पूर्ण चन्दवा समाप्त भयो। त्यसोभए हामी प्यानल गुणस्तर को निरीक्षण गर्न को लागी, छेद संग प्यानल, कम लाइनहरु छाता canopies मा कि जस्तै केहि हेर्नुहोस्। जब तपाइँ यो जाँच गर्न को लागी हाम्रो कारखाना मा जान सक्नुहुन्छinfo@ovidaumbrella.com
छाता उत्पादन को अन्तिम चरण पैकिंग अघि छाता गुणस्तर निरीक्षण छ।
यो हातले बनाएको छ, र एक एक गरी छानी गर्न को लागी छाता खोल्न र सजीलै बन्द गर्न सक्दछ, यदि छेद छ, कम सिलाई, भाँचिएको भागहरु र केहि छाता को लागी राम्रो छैन। हामी AQL 2.5 को रूप मा एक गुणस्तर नियन्त्रण मानक छ, किनकि हाम्रा ग्राहकहरु को केहि सुपर मार्केट उत्पादनहरु मा ध्यान केन्द्रित छ, त्यसैले हामी उनीहरु बाट यो हाम्रो छाता गुणस्तर को स्तर मा सुधार गर्न जान्दछौं। त्यो हाम्रो लागि साँच्चै उपयोगी छ, जबकि यदि तपाइँ छाता मा अधिक सुझाव छ हामीलाई थाहा दिनुहोस्info@ovidaumbrella.com
छाता फ्रेम विधानसभा
ज़ियामेन Dongfangzhanxin ट्रेडिंग कं, लिमिटेड हाम्रो आफ्नै Jinjiang Zhanxin छाता कं, लिमिटेड को नाम कारखाना संग छ कि एक छाता छाता फ्रेम उत्पादन हो। तल एक उत्पादन प्रगति हामी छाता फ्रेम विधानसभा भनिन्छ। तपाइँलाई थाहा छ त्यहाँ फ्रेम उत्पादन को धेरै चरणहरु छन्। तर सबै पछि, हामी सँगै फ्रेम भागहरु को सबै विधानसभा गर्न आवश्यक छ। यहाँ हामी शाफ्ट, वसन्त, पसली, धातु भागहरु ext छ। तपाइँ जान्नुहुनेछ यो एक सजिलो कदम होईन हामी पनी मिसिनहरु बाट मद्दत पाएका छौं। र यदि तपाइँ आउनुहुन्छ र Jinjiang मा हाम्रो छाता कारखाना मा जानुहोस्, मलाई विश्वास गर्नुहोस् तपाइँ छाताहरु को बारे मा अधिक जान्नुहुन्छ। हाम्रो टीम लाई सम्पर्क गर्नुहोस्info@ovidaumbrella.com, र हामीलाई भ्रमण गर्नुहोस् जब तपाइँ चीन आउनुहुन्छ।
Windproof यात्रा छाता, कस्टम लोगो छाता, कस्टम छाता, वर्षा छाता, निजीकृत छाता, बाहिरी तह,